२०७५ फाल्गुण २३ बिहिबार, दमौली। तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–३ स्थित चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयका ५० बढी विद्यार्थी भाइरल ज्वरोले बिरामी परेका छन्। विद्यालयमा अध्ययनरत विभिन्न कक्षाका ५० भन्दा बढी विद्यार्थी भाइरल ज्वरोले बिरामी परेका हुन्। सोमबारदेखि विद्यार्थीमा टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्नेलगायतका समस्या देखापरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेम थापाले जानकारी दिए। ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण २३ बिहिबार, खलङ्गा। जुम्लाका आठ स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले चार महीनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीदेखि स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाउँदा समस्या भएको तिला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक जगदीश नेपालीले गुनासो गरे। ... बाँकी अंश»
मिर्गौला फेल भएका बिरामीका लागि हेमो डायलासिको साटो घरमै सीएपीडी डायलासिस खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने
२०७५ फाल्गुण २२ बुधबार, काठमाडौं। मिर्गौला फेल भएकामा दुईवटा विकल्प छन्। मगौला प्रत्यारोपण गर्ने वा डायलालिस गर्ने। डायलासिस सेवामा पनि एउटा हेमो डायलासिस, अर्को सीएपीडी डायलासिस। प्रत्यारोपण, भन्नेबित्तिकै सम्भव नहुने भएकाले त्यो नभएसम्म ... बाँकी अंश»
एचआईभी मुक्त पहिलो बिरामीले गरे दोस्रो बिरामीलाई सार्वजनिक हुन आग्रह
२०७५ फाल्गुण २२ बुधबार, एजेन्सी। एचआईभी पोजिटिवबाट निको भएका दोस्रो ब्यक्तीको समाचारले पहिलो ब्यक्ती उत्साहित भएका छन्। अहिलेसम्म गोप्य राखिएका दोस्रो ब्यक्तीले आफुलाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने धारणा पनि पहिलो ब्यक्ती टिमोटी रे ब्राउनले राखेका छन्। ... बाँकी अंश»
दूध पिउने कारण बदलियो मानिसको डीएनए
२०७५ फाल्गुण २२ बुधबार, काठमाडौं। जनावरहरुको दूधसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि बजारमा धेरै प्रकारका दूध आएका छन्। जस्तो कि भटमास वा बदामबाट बनाइएको दूध। यस किसिमका दूधहरु निकै लोकप्रिय पनि बन्दै गएका छन्। यो शाकाहारी मानिसका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ। ... बाँकी अंश»
अस्पताल वर्गीकरण, कति शैयाको कुन तहमा ?
२०७५ फाल्गुण २१ मंगलबार, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रायलले मातहतका अस्पताललाई प्राथमिक, प्राथमिक ए, प्राथमिक बि र ट्रसरी गरी चार तहमा वर्गीकरण गरी ती अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवाबारे प्रष्ट पार्नाका साथै आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण २१ मंगलबार, काठमाडौँ । तपाइँलाई सञ्चो भएन ? आफन्तलाई स्वास्थ्य सस्थामा लैजानु पर्‍यो अथवा दुर्घटना परेकालाई तत्काल नजिकको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउनु पर्‍यो ? ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण २१ मंगलबार, पोखरा। सामान्य अवस्थामा विरामीको उपचार गरी स्वस्थ वनाउने अस्पताल आफै थलामा परेको छ भन्दा जो कसैलाई पत्याउन कठिन हुने गर्दछ। तर पोखरामा रहेको गण्डकी मेडिकल कलेज विद्यार्थीको आन्दोलनको कारण एक महिना देखि आफै विरामी भएको छ। कलेजमा अध्ययनरत विद्या ... बाँकी अंश»
पूर्वखोला सिलुवाका स्थानीयले लिए शिविरबाटै स्वास्थ्य सेवा
२०७५ फाल्गुण १९ आइतबार, पाल्पा । पूर्वखोला गाउँपालिका १ सिलुवाका जनताले गाउँमै स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । गोरखदल गणका सेनानी मनोज डंगोलको नेतृत्वमा गएको गण मेडिकल टोली, स्थानीय डाक्टर तथा नेपाल परिवार नियोजन संघ पाल्पा सहितको मेडिकल टोलिले गाउँपालिकाको समन्वयमा विरामीको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
पैसा कमाउने सपना बोकेर मलेसिया पुगेका विकास मिर्गौलापीडित भएर घर फिर्ता
२०७५ फाल्गुण १९ आइतबार, बनियानी । पैसा कमाउने सपना बोकेर मलेसिया पुग्नुभएका झापाका एक युवा मिर्गौलापीडित भएर स्वदेश फर्किएका छन् । ... बाँकी अंश»
सुपर कम्प्युटरजस्तो तेज दिमाग भएको सन्तान चाहिए के खाने
२०७५ फाल्गुण १७ शुक्रबार, काठमाडौं । गर्भावस्थामा नै बच्चाको दिमागी विकास शुरु हुन्छ । यस्तोमा शिशु कत्तिको बुद्धिमान् हुन्छ भन्ने कुरा आमाको खानेकुरामा धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ । यस्तोमा तेज दिमाग भएको बच्चाको लागि गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी कुराहरु समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ – ... बाँकी अंश»
डेन्ड्रफ कसरी हटाउने
२०७५ फाल्गुण १७ शुक्रबार, काठमाडौं । चिसो मौसममा मानिसहरुको छाला पनि सख्खा हुन्छ । यसले चायाको समस्या निम्त्याउँछ । यो समस्याले धेरै मानिसहरु समस्यामा हुन्छन् । यसबाट पार पाउनका लागि निम्न घरेलु उपायको प्रयोग गर्न सकिन्छ – ... बाँकी अंश»